How to Evaluate, Accept, Reject, or NegotiateaJob Offer (Part-3) ﻿
How to Evaluate, Accept, Reject, or NegotiateaJob Offer (Part-3)
Job Offer တစ်ခုကို ဘယ်လို အကဲဖြတ်မလဲ? လက်ခံမှာလား၊ ငြင်းမှာလား (သို့) ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ရမှာလား? (အပိုင်း - ၃)
www.jobsinyangon.com ရဲ့စာဖတ်သူပရိသတ်များခင်ဗျာ။ မင်္ဂလာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့က Job Offer တစ်ခုကိုဘယ်လိုအကဲဖြတ်မလဲ? လက်ခံမှာလား၊ ငြင်းမှာလား (သို့) ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ရမှာ လား? ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးရဲ့ အပိုင်း - ၃ ကို ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါး လေးမှာတော့ထိုသို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်သင်ဘာတွေကိုပြင်ဆင်ပြုလုပ်ထားရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက် ပြီး ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
“သင့်ကိုပေးအပ်လာတဲ့အလုပ် offer တစ်ခုမှာ သင်ပြောင်းလဲလိုတဲ့အရေးအကြီးဆုံးအချက်အလက်များ ကို ဆုံးဖြတ်သိရှိလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်” သင့်အနေနဲ့ ဘယ်အချက်တွေကိုသင်ထုတ်သုံးမလဲဆိုတာနဲ့ ထိုအရာတွေကို ဘယ်လိုအစီအစဉ်အတိုင်းသင်ထုတ်သုံးမလဲဆိုတာကို သင်ဆုံးဖြတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်။” ဟူ၍ Lees ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Weiss ကတော့ သင့်ရဲ့ညှိနှိုင်းဆွေး နွေးမှုနည်းဗျူဟာကိုရေးဆွဲဖော်ဆောင်ရာမှာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းတွေလိုအပ်ပါတယ် ဟူ၍ ပြောဆို ခဲ့ပါတယ်။ အကယ်၍သင့်အနေနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦး - HR administrator (သို့) ဝန်ထမ်းခေါ်ယူ ပေးသူ (recruiter) တို့နှင့်ပြောဆိုညှိနှိုင်းရမည်ဆိုပါက - “တောင်းဆိုမှုများကိုသာပြုလုပ်ခြင်းထက် ထိုသူ ကိုမေးခွန်းများ၊ သတင်းအချက်အလက်များနဲ့ သူတို့ရဲ့အမြင်များကိုပါမေးမြန်းကြည့်သင့်ပါတယ်။” “ထိုမှ တဆင့် အခြားသူဖက်မှမြင်ကြည့်ပြီး ပူးပေါင်းပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း (perspective of joint problem-solving) ဖြင့်ချည်းကပ်ကာ ညှိနှိုင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။” အောက်ပါကဲ့သို့ပြောဆိုကြည့်နိုင်ကြောင်းကိုလဲ သူကအကြံပေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ “သင်တို့ဘက်က offer ပေးလာတဲ့လစာငွေက ကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီလုပ်ငန်းကဏ္ဍကို ဆက်လက်ပြီးတိုးတက်မှုတွေရှိလာအောင် ကျွန်တော့်ဖက်က လုပ်ဆောင် ပေးလိုပါတယ်။ အချို့သောဖြစ်နိုင်ခြေတွေအရ ဒီအလုပ်ကိုပိုပြီးအဆင်ပြေချောမွေ့အောင်လုပ်နိုင်မယ့် အရာအချို့ရှိနေပါတယ် ဥပမာအားဖြင့် - လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးအစီအစဉ်များ၊ အလှည့်ကျဆောင်ရွက် ရေးအစီအစဉ်များ (ဒါမှမဟုတ်) အတတ်ပညာသင်ကြားရေးအတွက် အထောက်အပံ့ပေးခြင်းများ အစရှိ တဲ့အရာတွေက ဒီအလုပ်ကိုပိုပြီးအဆင်ပြေချောမွေ့လာစေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒီအထဲက ဘယ်အရာ တွေကိုများ လုပ်ပေးဖို့အဆင်ပြေနိုင်ပါမလဲခင်ဗျာ။”
မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာမှုရှိပါ ဒါပေမယ့် တက်တက်ကြွကြွလဲရှိနေပါစေ
ကျန်ရှိမယ့်အရာကတော့ “သမားရိုးကျ ညှိနှိုင်းမှုများပဲဖြစ်ပါတော့တယ်” ဟူ၍ Lees က ပြောဆိုခဲ့ပါ တယ်။ “သင့်အနေနဲ့ သင်ပေးဆပ်လက်ခံဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီး သင် တောင်းဆိုတဲ့အရာများရဲ့တန်ဖိုးကို နည်းနိုင်သမျှနည်းပါးစွာတောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြလိုက် ပါ။” သင့်ဖက်က သေသေချာချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်၊ အကဲဖြတ်မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြသလိုက်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် သင့်အနေနဲ့ “ကျွန်တော်က ဒီလုပ်ငန်းကဏ္ဍနဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားများကို နှစ်သက်မှုရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တစ်ပတ်မှာ တစ်ရက်လောက် work from home လုပ်ချင်တာကို ခွင့်ပြု ပေးလို့ရနိုင်မလား။” ဟူ၍ မေးမြန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ “မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင် မာမှုရှိပြီး တက်တက်ကြွကြွရှိတဲ့ ညှိနှိုင်းသူတစ်ဦးအဖြစ်ပုံဖော်ထားပါ””အမြင်ကျယ်ကျယ်ထားပြီး သဘောတူညီချက်ရရှိနိုင်အောင် ပြုလုပ်လိုက်ပါ။” ဟူ၍လည်းသူကထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ “သင့် အနေနဲ့ အရာအားလုံးကိုညှိနှိုင်း၍ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘဲ တစ်စုံတစ်ရာကို သဘောတူညီလိုက်ပြီ ဆိုပါက နောက်ဆုတ်၍ရနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။” ဟူ၍ Lees က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “ဒီကိစ္မှာ သင်ဘာကို တောင်းဆိုလိုသလဲဆိုတာထက် သင်ဘယ်လိုတောင်းဆိုမလဲဆိုတာကအဓိကကျပါတယ်။ ကောင်းမွန်စွာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုရှိပြီး၊ လေးလေးစားစားနဲ့ အပြုသဘောဆောင်စွာတောင်းဆိုတတ်ရပါမယ်။ သင်ကို သူတို့က သူတို့အနေနဲ့ အတူလက်တွဲလုပ်လိုတဲ့သူတစ်ဦးအဖြစ် ထင်မြင်ယူဆသွားစေလိုမှာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟူ၍ Weiss ကဖြည့်စွက်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
ထို offer က သင်နဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိပါက ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးငြင်းဆိုလိုက်ပါ။
ဒီလိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများမှာ ပေးဆပ်ခြင်းနဲ့ ရယူခြင်းဟာ ဒွန်တွဲနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင် တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အရာတိုင်းကို ငြင်းဆိုခံနေရပါက ဒါဟာ “သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ဖြစ်လာနိုင်သူဘက်က လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကို ပြသနေပြီး ဒီလို စီမံအုပ်ချုပ်မှု ပုံစံမျိုးအောက်တွင် သင်လည်းအလုပ်လုပ်လိုမှာမဟုတ်ပါဘူး။” ဟူ၍ Lees က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆင်ပြေကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်းကိုပြသနေတဲ့ နိမိတ်လက္ခဏာများကို သတိထားလေ့လာပါ။ “သင့် ဆဌမအာရုံက အာရုံခံလိုက်နိုင်တဲ့အရာတွေကို ဂရုစိုက်ပါ။””အကယ်၍ ဒီလိုဂရုတစိုက်နားထောင်ခြင်း က သင့်ကို ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်သင့်ကြောင်းပြောဆိုနေတယ်ဆိုရင် နားထောင်လိုက်ပါ။” ဒီအပြင် အလုပ် offer တစ်ခုက မိမိနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အတွက် ငြင်းဆိုလိုက်ခြင်းဟာ ရှက်စရာကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ “သင့်အနေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခု၊ နှစ်ခုလောက်နဲ့ ထိုအလုပ် offer ကို ယဉ်ယဉ်ကျေး ကျေးငြင်းဆိုလိုက်သရွေ့ပေါ့။ ဥပမာအားဖြင့် - ဒီအလုပ်က သင့်ကိုလုံလောက်တဲ့တွန်းအားမဖြစ်စေတာ ကြောင့်၊ ဒါမှမဟုတ် သင်ကအခြားမတူညီတဲ့လုပ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ချင်တာကြောင့် အစရှိ သည်ဖြင့်ပြောဆိုပြီး ငြင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲ သင့်အနေနဲ့ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ် နေစရာမလိုပါဘူး။” ဟူ၍သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် “ဒီအခွင့်အလမ်းကိုလည်းဆုံးရှုံးမသွားရ စေရန်အတွက်ကိုလည်း ပြုလုပ်ထားရပါမယ်။” ”သင်လက်ရှိဆက်ဆံနေရတဲ့သူများဟာ သင့်ရဲ့ ဖောက်သယ်များ၊ အကြံပေးသူများနဲ့ သင့်ရဲ့ အနာဂါတ်အလုပ်ရှင်များပင်ဖြစ်နေနိုင်တာမို့ သင့်အနေနဲ့ လေးစားသမှုနဲ့ ဆက်ဆံထားသင့်ပါတယ်။
• သင့်ရဲ့အလုပ်ကနေ သင်ဘာကိုလိုချင်သလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးနောက် ဒီအရာအပေါ်အခြေခံ၍ ပေးအပ်လာတဲ့အလုပ် offer တွင် သင်ပြောင်းလဲလိုတဲ့အချက်များကို စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရန်။
• သင်ငြင်းဆိုမယ့်အရာတွေကို သေချာစွာ စဉ်းစားရွေးချယ်ပြီးမှ ငြင်းဆိုရန်။
• ပုံမှန်ပြုလုပ်နေကျ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုနည်းစနစ်များကိုအသုံးချပြီး သင့်အနေနဲ့ သင်ပေးဆပ် လက်ခံဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီး သင် တောင်းဆိုတဲ့အရာများရဲ့ တန်ဖိုးကို နည်းနိုင်သမျှနည်းပါးစွာ တောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြရန်။
• ပေးအပ်လာတဲ့အလုပ် offer အကြောင်းကိုမေးမြန်းရာတွင် သံသယဖြစ်မှု၊ အဆိုးမြင်ဝေဖန်မှု များကိုပြုလုပ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်။
• သင့်အနေနဲ့ ငြင်းဆိုရှောင်ထွက်နိုင်မယ့် အခြားရွေးချယ်စရာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အစား လျစ်လျူရှုထားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်။
• အဆင်ပြေကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်းကိုပြသနေတဲ့ နိမိတ်လက္ခဏာများကိုလျစ်လျူရှုပြီး သင့်ရဲ့ ဆဌမအာရုံက သင့်ကိုဒီအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုသင့်ကြောင်း နမိတ်ပြပြောကြားနေတဲ့အခါ မှာ လက်မခံပဲရှေ့ဆက်တိုးခြင်းအား ရှောင်ကြဉ်ရန်။
ဒီကနေ့မှာတော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။ မနက်ဖန်တွင် Job Offer တစ်ခုကို ဘယ်လို အကဲဖြတ်မလဲ? လက်ခံမှာလား၊ ငြင်းမှာလား (သို့) ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ရမှာလား? ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးရဲ့ အပိတ် အနေနဲ့ နမူနာအခြေအနေများကိုလေ့လာခြင်းအနေနဲ့ case study ၂ ခုကို တင်ဆက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။